:: My Little World ::: December 2008
Posted by Nay Nay Naing at 12/31/2008 04:31:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/30/2008 03:26:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/29/2008 06:00:00 PM5comments
Boxing လုပ်ပြီး Busy နေတာလားလို့လာမမေးနဲ့ ။
ဒီနေ့Boxing day။ Boxing Day မှာ Busy နေတယ် ပြောချင်တာ။
တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ အားလပ်ရက်။ ဒီမှာတော့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။
ဒီနေ့ တစ်ရက် ခွင့်ယူလိုက်ရင် ၄ ရက်ခွဲ ဆက်တိုက် အားလပ်ရက်ရတာဆိုတော့ အတော်များများ အလုပ်မလာ ခွင့်ယူကြတယ်။ အိမ်မှာနားတဲ့သူက နား ခရီးသွားတဲ့သူကသွားတဲ့။
ခွင့်တွေ အများကြီးကျန်သေးပေမယ့် ဘယ်မှလည်း သွားစရာမရှိ၊ အိမ်မှာနေလည်း ပျင်းစရာမို့သွားစရာရှိတဲ့သူတွေ သွားကြ၊နားကြပါစေဆိုပြီး ကျွန်မ အလုပ်လုပ်မယ် ပြောလိုက်တယ်။
အဖွဲ့ ထဲမှာ အနည်းဆုံး ၁ ယောက်တော့ အလုပ်လာမှ ဖြစ်မှာလေ။ မနက်ပိုင်း အလုပ်သိပ်မရှုပ်ပေမယ် နေ့ လယ် ထမင်းစားပြီးပြန်အလာ Helpdesk က ဖုန်းခေါ်တယ်။ Production မှာ Users တချို့ ဟိုဟာ လုပ်မရ၊ ဒီဟာလုပ်မရဖြစ်လို့ တဲ့။
Data တွေ လိုက်စစ်၊ Server တွေလိုက်ကြည့် တာလည်း အားလုံး အဆင်ပြေနေတယ်။
ဟိုဘက် ယူဆာတွေကလည်း လုပ်မရဘူးတဲ့။
ဒီနေ့သောကြာဆိုတော့ အားလုံးက အရေးကြီးတယ်၊ ပြဿနာတွေ ဒီနေ့ ရှင်းပေးစေချင် ဆိုတာကြီးပဲ။
လွှဲချစရာလူလည်းမရှိ၊ ကူရှင်းပေးမယ့်သူလဲ မရှိ၊ နောက်ဆုံး ရှိသမျှ Logs တွေအကုန် လိုက်ဖတ်ကြည့်ရတယ်။
ကိုယ်ကလည်း ဒီမနက်မှ အငြိမ်နေ Company ထဲမှာ သုံးတဲ့ Chat ကို သွားဝင်ထားမိတယ် ဆိုတော့ Helpdesk ကလူတွေကလည်း Any Update? ဆိုပြီး msg တွေပို့ ။ Chat က ထွက်သွားလို့ ကလည်း မဖြစ်၊ Message မပြန်လို့ ကလည်းမရ။ Chat ကထွက်လိုက်လည်း ဖုန်းခေါ်မှာပဲဆိုတော့ မထူးပါဘူး။
logs တွေလိုက်ဖတ်ပြီး ခေါင်းတွေမူးနောက် ရူးချင်လာတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဘာ error မှလည်းမတွေ့ ။
အရေးထဲ မန်နေဂျာအသစ်က ဟိုနေ့ က Business User တွေပို့ တဲ့ အီးမေးမှာပါတဲ့ ပြဿနာက ဘာလည်းဆိုတာ ရှင်းပြနိုင်မလားတဲ့။ မအားဘူး နောက်မှ ပြောနိုင်မယ် ပြောလိုက်တယ်။ အားရင် ပြောပါတဲ့။
ခေါင်းရှုပ်နေတဲ့ အချိန်စကားများများ မပြောချင်ဘူး၊ အဲဒီကိစ္စကလည်း အတော်လေး ရှင်းပြမှ ရမှာ။ မောတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ၆ နာရီ အမြန်ထိုးပါတော့လို့ ပဲ ဆုတောင်းနေမိတယ်။
ခုနကတော့ ပြဿနာတွေ အားလုံးရှင်းသွားပြီ။ Helpdesk က တစ်ယောက်က ချက်ကနေပြီး ပြဿနာတတ်နေတဲ့ ယူဆာတွေ အဆင်ပြေသွားပြီလို့ ပြောတယ်။
ဘာလုပ်လိုက်လဲလို့လာမေးတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘူး ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
တစ်ခုခု ကိုယ်ရှင်းလို့ပြဿနာအဆင်ပြေသွားတာဆို report က တင်ရအုံးမယ်။
စိတ်ထင် ယူဆာတွေသုံးတဲ့ Internet Service Provider က တူတယ် ထင်တယ်။ ဟိုတခါလည်း ပြဿနာ တတ်သေးတယ်။ ထားပါ။ ဒီနေ့ ကတော့ ပြဿနာတွေ ရှင်းသွားရင် ပြီးတာပဲ။
ဘာပြဿနာမှ မတွေ့ တော့ ဘာမှရှင်းမရဘူးဆိုလို့ ပြောလိုက်တော့ Helpdesk က လူတွေက We are so luckly တဲ့။ ဒီနေ့Cases တွေ မရှင်းနိုင်ရင် တနင်္လာနေ့ မှာ ဘာကြောင့်ဆိုတာကြီးကို အဆင့်ဆင့်ရှင်းရတော့မယ်လေ။
သူတို့ လည်း ခွင့်သွားတဲ့သူများတော့ အတော်အလုပ်ရှုပ်သွားတယ် ပြောတယ်။
ငါလည်းတစ်ယောက်တည်း မူးနောက် ရူးချင်သွားတာဆိုတော့ သူတို့ လည်းတူတူပဲလို့ ပြောတဲ့အခါ သူတို့ က ထမင်းတောင် မစားရသေးဘူးတဲ့။ အချိန်ကြည့်တော့ ညနေ ၄ နာရီကျော်နေပြီ။
အဲဒီပြဿနာရှင်းအပြီး မန်နေဂျာနဲ့ ဆက်စကားပြောရတယ်။ မောတယ်။
မောလို့ အလုပ်ဆက်မလုပ်ပဲ ဘလော့ရေးနေတယ် ..
ခဏနေ ၆ နာရီထိုးတော့မယ်။
Xmas ပြီးနောက်တနေ့ ကို Boxing day ကို Shopping day လို့ လည်းခေါ်တဲ့ အတွက် အလုပ်အပြန် ညနေ အိမ်တန်းမပြန်ဘူး၊ Shopping သွားမယ် စိတ်ကူးတယ်။ Boxing Day အကြောင်းသိချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်တယ်။
ဘာဝယ်မလဲဆို ဘာမှ ၀ယ်ဖို့ စိတ်ကူး မရှိဘူး။ Widnow Shopping။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်မှာ။ အဓိက Computer ပစ္စည်းတွေ သွားကြည့်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2008 06:17:00 PM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/26/2008 02:04:00 PM 10 comments
And so this is Christmas(war is over)
Posted by Nay Nay Naing at 12/25/2008 12:00:00 AM5comments
ဟိုတစ်နေ့ က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ်။ ကျွန်မ ဘလော့ရဲ့ အရောင်က ဘာအရောင်လဲတဲ့။ ကြည့်တဲ့ Browser ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်ကွာမယ်လို့ ဖြေလိုက်တယ်။
ဒီဘလော့ကို IE Browser နဲ့ ကြည့်မယ်ဆို မြင်ရတဲ့အရောင်နဲ့တခြား Browsers တွေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆို မြင်ရတဲ့ အရောင် မတူဘူး။ စပြီး Template ပြောင်းကထဲက အဲဒီလို မတူအောင် လုပ်ထားတာပါ။ လူအများစုက ကိုယ်သုံးနေကျ Browser တစ်ခုကိုသာ အမြဲသုံးလေ့ ရှိကြတော့ သတိမထားမိကြဘူး ထင်ပါတယ်။ အရင်သုံးတဲ့ Template အဖြူရောင် နောက်ခံနဲ့တုန်းကလဲ အခုလိုပဲ တချို့ နေရာလေးတွေမှာ မတူအောင် လုပ်ထားတယ်။ လက်ရှိသုံးထားတဲ့ Template ပုံစံက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံဆိုတော့ နောက်ခံအရောင်ကိုပဲ မတူအောင် လုပ်ထားဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်းက အဲဒီနေ့ မှ IE သုံးပြီး ကျွန်မ ဘလော့ကို ကြည့်ဖြစ်တယ် ထင်ပါတယ်။ မေးတယ်။ ဘာကြောင့် အဲလို လုပ်ထားတာလဲ တဲ့။ ကျွန်မလည်း ဘာရယ် မဟုတ်၊ လုပ်ချင်လို့လုပ်ထားတာလို့အရှင်းဆုံးဖြေပေး လိုက်တယ်။ တမျိုးစီ မြင်ရတော့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် Browser တမျိုးနဲ့ ကြည့် တရောင်စီ မြင်ရအောင် စမ်းကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိပေမယ့် အချိန်မပေးနိုင်လို့မလုပ်အားသေးဘူး။
ဒါနဲ့ ... ဒီနေ့Christmas Eve နေ့ တ၀က်ပဲ ၁ နာရီအထိပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်။ ၁၂ မှာ နေ့ လယ်စာ ထမင်းထွက် စားမယ်။ ပြီးရင် အိမ်ပြန်ပြီ။ အားလုံးပဲ Happy Holidays ပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 12/24/2008 12:01:00 PM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/23/2008 11:23:00 AM 8 comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/22/2008 07:01:00 PM 11 comments
Song Credit to May11
Posted by Nay Nay Naing at 12/22/2008 01:24:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/21/2008 03:21:00 AM5comments
ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့မမှာလိုက်ပေမယ့် ဖေဖေလာတုန်း မေမေက အားလူးကြော်ထုတ်တွေ အများကြီး ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကြိုက်လောက်မယ့် ထင်တဲ့ အရသာရှိတဲ့ အမျိုးအစားကို ၀ယ်ထည့်ပေးလိုက်တာတဲ့။ ရှိတော့ စားဖြစ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စားတယ်၊ စာဖတ်ရင်း စားတယ်၊ အလကားနေ အလကား စားတယ်။ မကုန်ခံနိုင် ရိုးလား။ ဒါက နောက်ဆုံးလက်ကျန် အထုတ်။ မစားခင် မှတ်တမ်းတင် လိုက်တာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာတောင် သိပ်စိတ်မရှည်ဘူး။ စားချင်စိတ်က များနေလို့ ။ ရှေ့ နှစ်ဆန်း ၁ ရက် ၂ ရက် လူကြုံရှိတယ်၊ ထပ်ပို့ ပေးမယ် ပြောတယ်။ ရေးချင်တာလေး နည်းနည်းရေးပြီး ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အအေးသောက်လိုက် အာလူးကြော်စားလိုက် လုပ်မယ်။
အားလူးကြော် ကြိုက်တယ်။ လူတွေက ပြောတယ် အားလူးစားတာများရင် ၀တယ်တဲ့။ အလကားပြောတာ။ ရန်ကုန်မှာဆို ထမင်းစားရင် အိမ်က ကြော်ပေးတဲ့ အာလူးကြော် အကျွတ်ကြော်၊ အပျော့ကြော် အမြဲနီးပါး ပါတယ်။ နေ့ လယ်ပိုင်း အိမ်မှာရှိတယ်ဆိုလည်း စာအုပ်ဖတ်ရင်း ဒီလို အားလူကြော် အထုတ်တွေ စားတယ်။ အိမ်မှာ မေမေက အများကြီးဝယ်ပေးထား တတ်တယ်။ အမျိုးစုံပဲ။ အခုလိုဟာ၊ အားလူး အချောင်းကြော်၊ ဇကာကွက်ကြော်၊ ပိုးတီလို လှီးပြီးကြော်ထားတာ စုံနေတာပဲ။ အာလူးကြော်ထုတ်တိုင်းတော့ မကောင်းဘူး အချိုမှုန့် အရသာ အများကြီးပါတာ၊ တခြားအရသာတွေ ထည့်ထားတာဆို လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ မစားဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက်တော့လည်း အဆင်ပြေရင်ပြေသလို စားတာပဲ။ ဒီကဟာတွေ မကြိုက်ဘူး။ အာလူး အရသာ မရဘူး။ သဘာဝ အာလူးကြော်နဲ့တူတာလိုက်ရှာ ၀ယ်စားတယ်။ ကျောင်းတတ်တုန်းက ၀ယ်စားတဲ့ အာလူးကြော်တွေက ဈေးကြီးတယ်။ တခြားအထုတ်တွေ 0.50 လောက်ပဲရှိတဲ့ အချိန်မှာ Natural HandMade Potato chip က 1.70 -2.00 လောက်ရှိတယ်။ ဒီနိုင်ငံရောက်တော့ သိပ်မစား ဖြစ်တော့ဘူး။ ရှာမရတာလည်း ပါတယ်။ မြန်မာဆိုင်တွေမှာရောင်းတာတွေကလည်း မလတ်ဘူး။ ဆီဂျီးစော်နံလို့ဝယ် မစားဖြစ်ဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 12/21/2008 01:07:00 AM4comments
Microsoft ကနေပြီး Internet Explorer အတွက် Update ထွက်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေကတင် IE browsers တွေကို အလွယ်တကူ ဖောက်လို့ ရတယ်၊ လုံခြုံမှု့ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း သိခဲ့ရပြီးနောက် အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် အခုလို့Microsoft ကနေ IE အတွက် Update တွေကို ထုတ်တာပါ။ Automatic Update လုပ်မထားဘူးဆို အဲဒီ IE နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Updates တွေကို Window Update မှာ သွားလုပ်လို့ ရပါတယ်။
Microsoft က အဲလိုပါပဲ။ တခြား Microsoft Product တွေအတွက်လည်း Update တွေ အမြဲ ထုတ်တယ်။ တစ်ခုခု ထွက်ပြီး သိပ် မကြာဘူး၊ Security အတွက်၊ ဘာအတွက် ညာအတွက်ဆို Update တွေ အမြဲထွက်လာလေ့ ရှိတယ်။ ရှာတဲ့သူတွေက ရှာ၊ ဖောက်တဲ့သူတွေက ဖောက်၊ ပိတ်တဲ့သူက လိုက်ပိတ်ပေါ့။ ထုံးစံပါပဲ။ Window Update setting ဘယ်လို ပြောင်းရမယ်မှန်း မသိတဲ့သူတွေ အောက်က လင့်တွေမှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Learn about Windows Update in Windows XP.
Learn about Windows Update in Windows Vista.
Window Automatic Update Setting ရွေးရာမှာ ပုံမှန် ကွန်ပြူတာ သုံးသူတွေက Automatice Update ကို ရွေးချယ်ထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မ အိမ်က ကွန်ပြူတာမှာတော့ Download updates for me , but let me choose when to install them. ဆိုတဲ့ setting ထားတယ်။ တချို့update တွေက ကွန်ပြူတာက restart လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ ကျွန်မက ကွန်ပြူတာကို အမြဲဖွင့်ထားတတ်တော့ တစ်ခုခုဆို auto restart အလိုလို လုပ်သွားမှာစိုးလို့အဲဒီ setting ထားတာပါ။ ကွန်ပြူတာ ရှေ့ မှာရှိနေလို့ဒီအောက်ကပုံမျိုးလေး ပေါ်လာရင် မဖြစ်မနေ update လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တော့ ကျွန်မမှာရှိပါတယ်။ ဒီ setting က Server တွေမှာ ထားလေ့ရှိတဲ့ setting မျိုးပါ။
Operation System ကို Microsoft က ထုတ်တဲ့ Window OS တင်မကဘူး Microsoft ရဲ့ တခြား Product တွေ သုံးသေးတယ်ဆိုရင်တော့ Window Update အပြင် Microsoft Automatic Update ပါလုပ်သင့်ပါတယ်။ Window Update က OS အတွက်ပါ။ Microsoft Update မှာတော့ Window Update + Other Microsoft Products Updates တွေပါတယ်။
Switching from Windows Update to Microsoft Update in Wodnow XP.
Switching from Windows Update to Microsoft Update in Windows Vista.
Posted by Nay Nay Naing at 12/19/2008 02:07:00 PM5comments
Photo taken by wabberjocky
သတ္တိရှိတဲ့ မွှေးရနံ့ တွေနဲ့ ။ ။
(ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၂၀၀၆ မတ်)
Posted by Nay Nay Naing at 12/18/2008 10:01:00 PM0comments
ဒီနေ့ စားဖြစ်တဲ့ နေ့ လယ်စာ။
ဖိလစ်ပီနို ဆိုင်က။ ထမင်းစားရင်း အအေးက Coke သောက်တယ်။ Coke ကို ရိုးရိုးဟာပဲ ကြိုက်တယ်။ တခြားအရသာတွေ ထည့်ထားတာ မကြိုက်ဘူး။ Light လည်းမကြိုက်ဘူး။ Diet လုပ်စရာလိုမှ မလိုတာ၊ ပြီးတော့ အရသာလည်း မရှိဘူး။ ဘယ်လောက်ကုန်တယ်ဆိုတာ မပြောတော့ဘူး စိတ်ကူးတယ်။ တော်ကြာ အရင်ကတော့ စားသာစား၊ စားဖို့ သာ အရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောတတ်တဲ့သူ၊ တစ်နေ့ တစ်နေ့အစားအသောက် အတွက် ကုန်ကျစာရိတ်တွေ ကြည့်ပြီး တစ်သက်လုံး ကျွေးဖို့နောက်တွန့် သွားမှာ စိုးလို့ ပါ။ တစ်ခုခုဆို မပြောပဲ မနေနိုင်တဲ့ အကျင့်ကရှိနေတော့ မနေ့ က ညစာစားတာ ၆၀ နီးပါးကုန်သွားတယ် ဆိုတာတော့ ပြောလိုက်မိသေးတယ်။
အဲဒီဆိုင်က ဖွင့်တာမကြာသေးဘူး ထင်တယ်။ ဆိုင်မှာ ရောင်းနေတဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က ဈေးရောင်းတာ မကျွမ်းသေးဘူး။ စားစရာ ပေးပြီးပိုက်ဆံ မယူလိုက်ဘူး။ ၀ယ်သူလဲ မများ၊ လူလည်း အဲဒီလောက်မရှုပ်သေးပဲနဲ့ ။ ကျွန်မလည်း စားစရာယူပြီး ဒီတိုင်းထွက်လာတာ နည်းနည်းဝေးဝေး ရောက်မှ ပိုက်ဆံ မပေးရသေးတာ သတိရတယ်။ ပေးဖို့ ပိုက်ဆံက အစားအသောက်ဗန်းနဲ့ အတူ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားရက်မို့သတိရတာ။ နောက်က လိုက်တောင်းမယ် ထင်နေတာ။ တောင်းလည်း မတောင်းဘူး။ ကိုယ်ထိုင်တဲ့ နေရာနဲ့ က နီးနေပြီဆိုတော့ ရှေ့ ဆက်ပဲသွား လိုက်တယ်။ စားပွဲမှာ စားစရာချပြီး ဆိုင်ကိုပြန်သွား ပိုက်ဆံပေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီဆိုင်က ကောင်မလေး ၂ ယောက်က သူတို့ ပိုက်ဆံမယူပဲ စားစရာပဲပေးလိုက်တယ် ဆိုတာ သိတောင် မသိကြဘူး။ ကောင်းရော။ ကြီးပွါးအုံးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/18/2008 03:03:00 PM3comments
ဒီနေ့ ရတဲ့ ကာတွန်းလေးကြည့်ပြီး အရမ်း သဘောကျသွားတယ်။ အိမ်က မိဘတွေကိုလည်း သတိရသွားတယ်။ သူတို့လည်း အဲဒီလိုပဲ ပြောမှာ သေချာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ မီတာခ မဟုတ်ဘူး၊ မီးစက်မောင်းရတဲ့ အတွက် ဓာတ်ဆီဖိုး။ ကျွန်မ ရန်ကုန် ပြန်တဲ့ အချိန်ဆို ရန်ကုန်မှာရှိနေသမျှ ညဘက်ဆို အင်တာနက်သုံးဖို့မီးစက်မောင်း ပေးရတယ်လေ..
Infocomm (IDA) က ဖြန့် တဲ့ အခုလို Security နဲ့ပတ်သက်တဲ့Cartoons တွေကို အလုပ်က IT Security Department ကနေပြီး Staff တွေအားလုံးစီကို ပို့ ပေးလေ့ရှိတယ်။ တခါလဲ ဒီမှာ တင်ဖူးပါတယ်။ သူတို့အဓိက ပေးချင်တဲ့ message က Operation System ကို အမြဲ update-to-date ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ပါ။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Window Update Setting ကို Automatic Updates ရွေးထား သင့်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/17/2008 08:12:00 PM9comments
ဒီနေ့နေ့ လယ်စာ ဒန်ပေါက် စားအုံးမလိ်ု့စိတ်ကူးတာ၊ ဆိုင်ထဲရောက်မှ ရှိတဲ့ ဟင်းတွေ မကြိုက်တာနဲ့အဲဒီဆိုင် အနီးအနားမှာရှိတဲ့ Food Court မှာ ငါးကြော် နဲ့ထမင်းမှာ စားဖြစ်တယ်။ ဒန်ပေါက်ဆိုင်က မြန်မာဒန်ပေါက်လို့လူပြောများတဲ့ ဆိုင်လေ။ ဆိုင်မှာ မြန်မာလို ကြိုဆိုပါ၏ လို့ရေးထားတယ်။ နောက်နေ့ မှ ထပ်သွားကြည့်အုံးမယ်။ အဲဒီ Food Court မှာ ထမင်းသွားစားတိုင်း ဒီနေ့စားတဲ့ ငါးကြော် ( Deep Fried Dory Fillet ) ကို အများဆုံး မှာစားလေ့ရှိတယ်။ ငါးကြော်က ကျွတ်ကျွတ်လေး စားလို့ ကောင်းတယ်။ ဆိုင်နာမည်က Fish Delights။
ငါးကြော်နဲ့ထမင်းက S$4.00 ပေးရတယ်။ ကြက်ဥကြော် ထည့်မယ်ဆို S$0.50 ထပ်ပေးရတယ်။ ကြက်ဥကြော်က မထည့်လည်းရတယ်။ Meal ထဲမှာမပါဘူး။ ထမင်းစားရင်း အအေးသောက်တော့ အအေးက ထုံးစံအတိုင်း S$1.20 ပေးရတယ်။ ဒီနေ့Coke မသောက်ဘူး။ သံပရာရည် ပဲ သောက်တယ်။ ဒီနေ့ နေ့ လယ်စာအတွက် အားလုံး စုစုပေါင်း S$5.70 ကုန်ခဲ့တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 12/17/2008 01:39:00 PM3comments
Precious Moments' Inspirations က ပို့ ပေးတဲ့ အီးမေးကနေ တစ်ဆင့် "Shot of inspiration - Secrets to Success" ဆိုတဲ့ Movie လေး ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ၃ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်။ Mary Kay Cosmetics ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ Mary Kay Ash လို့အမည်ရတဲ့ အမေရိကန် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပြောကြားခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှု့ အတွက် လျှို့ ဝှက်ချက် တချို့ကို ပုံလေးတွေ နဲ့ဖော်ပြထားတာ။
Know the power of encouragement.
Remove the chain that bind you.
Posted by Nay Nay Naing at 12/16/2008 10:49:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/16/2008 04:26:00 PM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/15/2008 02:21:00 PM5comments
ယုံကြည်မှု ကို အလကားမရပါဘူး။ တစ်ခဏချင်းလည်း မရနိုင်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုအတွက် တည်ဆောက်ယူရပါတယ်။ အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခု ပေးဆပ်ရပါတယ်။
၁။ ပွင့်လင်းမှု (Practice Openess)
၂။ မျှတမှု (Promote fairness)
၃။ ခံစားမှု (Express feeling)
၄။ ယုံကြည်မှု (Keep Confidence)
၅။ တစ်သမတ်ဖြစ်မှု (Be consistant)
၆။ ကတိစကားတည် (Keep promise)
၇။ အမှန်ပြော (Tell the truth)
၈။ အရည်အသွေးပြ (Show competence)
ပြောတဲ့အတိုင်း မလုပ်ရင် ယုံကြည်မှု မရပါ၊ မျှတမှု မရှိလျှင်လည်း ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လို့မရပါ။ တောက်ပတဲ့ အရည်အသွေး မရှိရင်လည်း "ယုံပါ" လို့ ပြောရုံ နဲ့ယုံကြည်မှု ကို မရပါ။ "ယုံစရာ" ရှိအောင် လုပ်နိုင်မှ ယုံကြည့်မှု ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ခံရမှု နဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ တစ်သားမတ်တည်း ကျနေပါမယ်။
စာဖတ်သူတစ်ဦး၏ မှတ်စု... ယုံကြည်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင် မှ ....
စိန်ခေါ်မှု များနှင့်အတူ - ဒေါက်တာနေဇင်လတ်
Posted by Nay Nay Naing at 12/14/2008 12:26:00 PM7comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/13/2008 10:23:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/12/2008 10:26:00 PM5comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ ပေးတာ။ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်သူများ အတွက် "The Economist" မဂ္ဂဇင်း အလွယ်တကူ မှာ ယူနိုင်တဲ့ နေရာ နဲ့ဈေးနှုန်း။ မြန်မာပြည်မှာ The Economist အမြဲ ၀ယ်ယူဖတ်ရှု့ တဲ့ သူတွေရှိတယ် ဆိုရင် သတင်းပေး နိုင်အောင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင် တစ်နှစ်စာလောက်ဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်အောင် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ကြော်ငြာစာရွက်မှာ ပါတဲ့အတိုင်းဆို ဈေနှုန်းက တစ်ဝက် ကျော်ကျော်တောင် သက်သာတယ် မဟုတ်လား။
အိမ်မှာသာ Economist Magazine အမြဲဖတ်တဲ့ သူ ရှိနေမယ်ဆို မှာဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ ဒါနဲ့မြန်မာပြည်မှာ The Economist Magazine ဖြန့် ဝေသူတွေနဲ့ကျွန်မ နဲ့ဘာမှ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အင်း.. ဒါလေး အီးမေးပို့ ပေးတဲ့ သူကတော့ မုန့် လိုက်ကျွေးမယ် လာပြောနေတယ်။ ခင်လို့မင်လို့ကျွေးမွေးပြုစုချင်တာ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။.
Posted by Nay Nay Naing at 12/12/2008 10:50:00 AM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/11/2008 05:13:00 PM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/11/2008 02:13:00 PM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/11/2008 11:42:00 AM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/09/2008 12:06:00 PM7comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/08/2008 09:50:00 PM7comments
( မဟော်သဓာ သုတရသစုံ မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် ၁၈၊ ဇူလိုင် ၂၀၀ရ )
Credit to MgPo from MMCP forum ခံစားမှု့ ကဗျာစာစုများမှ
Posted by Nay Nay Naing at 12/07/2008 04:12:00 PM2comments
Posted by Nay Nay Naing at 12/06/2008 09:14:00 PM 8 comments